Home » Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu » Mgbanwe ibu Sheremetyevo Moscow toro site na 4.5% na Q1 2021
Ọdụ ụgbọ elu Sheremetyevo so na ọdụ ụgbọ elu Tot-5 dị na Europe, ọdụ ụgbọ elu Russia kachasị elu na njem ndị njem na ndị njem.
Sheremetyevo buuru ihe karịrị tọn 80,000 ibu na ihe dị ka tọn 8,500 nke mail na Q1
Sheremetyevo nwere òkè nke 68.7% nke ụgbọelu Moscow Air Cluster na ahịa ụgbọ njem ụgbọelu
Mmụba nke ntụgharị ibu mere n'oge oge mbelata dị ukwuu na ikike ibu
Ibu ibu na Ọdụ ụgbọ elu nke Sheremetyevo International Airport gafere ọnụọgụ ọrịa na-efe efe na nkeji iri na ise nke 1, na-amụba site na 2021% karịa otu oge n'afọ gara aga.
Sheremetyevo ji ihe karịrị tọn 80,000 buru ibu na ihe dị ka tọn 8,500 nke mail na nkeji nke mbụ, na-akwado ọnọdụ ya dị ka ebe kasị ibu ụgbọ ibu na Russia na onye ndu n’ọdụ ụgbọelu Moscow. Sheremetyevo nwere òkè nke 68.7% nke ụgbọelu Moscow Air Cluster na ahịa ụgbọ njem ụgbọelu.
Ọganihu nke ntụgharị ụgbọ mmiri mere n'oge oge mbelata dị ukwuu na ikike iburu ibu metụtara mmachi mba ofesi na njem ụgbọ elu ndị njem, nke ewepụtara na ngwụsị March na mbido Eprel 2020.
Transportationgbọ njem ụgbọ elu nke ụgbọ elu ụlọ, nke laghachiri n'ọrịa na-efe efe na ọkara nke abụọ nke 2020, na-aga n'ihu na-egosipụta ezigbo mgbanwe. Na nkeji iri na ise nke 2021, onye ọrụ Moscow ibu ejiri ihe karịrị tọn 21,000 nke ibu na ụgbọ elu ụlọ, 19% karịa karịa n'otu oge ahụ n'afọ gara aga.
Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu bụ na cargos ndị na-ebubata ụgbọ elu nke ụgbọ elu ụlọ na-ebu, nke mụbara karịa 1.5 ugboro site na olu. Cargos mbupụ nke ụgbọ elu ụlọ na-eto site na 9% ma nyefee site na 12.9%. Ọganihu ndị a sitere n'ụgbọ elu ụgbọ elu bụ n'ihi mmụba nke okporo ụzọ nke onye ọrụ mmekọrịta Sheremetyevo, Aeroflot Group.
Nnukwu ibu nke ụgbọ elu mba ụwa mụbara site na 6.3%. China, Germany, Netherlands, South Korea na United States ka bụ ndị isi mba ọzọ na-aga, na-eme ihe dị ka ọkara nke ngụkọta.